Lucas Vazquez Oo CR7 Kula Taliyay Halkaan Arin Si Uu Messi Ugu Garaaco Tartanka Goodhalinta La Liga %
Xidiga kooxda kubada cagta Real Madrid, ee Lucas Vazquez, ayaa wuxuu aaminsan yahay in saaxibkiisa Cristiano Ronlado, uu fursad fiican uhaysto ku guuleysiga sanad ciyaareedkan tartanka gooldhalinta ee horyaalka La Liga ee wadanka Spain.
Tartanka gooldhalinta horyaalka Spain, ayaa waxaa ugu cad-cadaa bilowgii xili ciyaareedkan laacibka Barca, ee Lionel Messi, kaasoo hadda leh 25 gool, laakiin Ronaldo oo bandhigiisii fiicnaa dib uhelay ayaa sababtay inuu soo labo kacleeyo isagoona 22 gool.
Inuu kusoo dhawaado Messi ayaa waxay sababtay Ronaldo, kadib markii uu dhaliyay afar gool kulankii ay 6-3 kusoo dar-dareen dhigooda Girona, kulankaasoo uu CR7 wax qabad fiican uu sameeyay, taasoo shaki badan gelisay inuu mustaqbalka Messi.
“Mar walba oo uu fiican yahay Ronaldo, Real Madrid, waxay noqoneysaa mid wanaagsan,” ayuu Lucas Vazquez, usheegay warbaahinta kadib markii ay soo dhamaatay ciyaartii Girona, markaasoo uu gool qurux badan uu dhaliyay.
“Cristiano wuxuu mar walba ku dheelaa qaab ciyaareed fiican, isagoona ah mid maalin walba soo bandhhiga awoodiisa ciyaareed,” ayuu hadalkiisa kusii daray.
“Hadii uu tani sii wado wuxuu awood karaa inuu kusii dhawaado Messi,” ayuu hadalkiisa kusoo gaba gabeeyay Lucas Vazquez, kaasoo udhashay wadanka Spain.
Geesta kale, laacibkaan oo ka hadlay sida uu u arko inuu kasoo muuqdo liiska ciyaartoyda wadanka Spain, ayaa wuxuu sheegay inuu aad ugu farax-san yahay, isagoona rajo fiican ka muujiyay inuu sidaasoo kale uu kasoo muuqdo safka aadeysa Koobka adunka 2018.
Leo MessiLucas VazquezRonaldo
Arthur Oo Kashifay Labo Xidig Oo Waa Weyn Kuwaasoo Ku Qanciyay Kusoo Biirista Barcelona